▷ Ahịa LG laptop kacha mma taa: echiche, ntuziaka na ndị ọzọ!
Southlọ ọrụ South Korea LG Ọ bụ otu n'ime ndị asọmpi nke Samsung ibe ya, dịkwa na ngalaba laptọọpụ. Ọ bụ ezie na ha amachaghị ewu ewu dị ka HP, ASUS, Dell, Lenovo, wdg, a na-ahụkwa ụdị ndị Korea, nwere akụrụngwa imewe, nwere njirimara ngwaike dị elu, nwere ogo yana ọmarịcha ihuenyo.
Ruo ọtụtụ afọ, ọ dịghị mmegharị banyere akụkọ, ma ugbu a LG na-alọghachi iji kwalite ahịrị akụrụngwa ya nwere usoro dị ịrịba ama, dị ka Gram ...
1 Ahịa kacha mma taa na laptọọpụ LG
2 LG laptọọpụ nso
2.3 LG gram na-agbanwe agbanwe
3 Ụfọdụ atụmatụ nke LG laptọọpụ
4 Ogo ihuenyo dị na laptọọpụ LG
4.1 13 sentimita
4.2 14 sentimita
4.3 15 sentimita
4.4 17 sentimita
5 LG ọ bụ ezigbo akara laptop? Echiche m
6 Ebe ị ga-azụta laptọọpụ LG dị ọnụ ala
Ahịa kacha mma taa na laptọọpụ LG
Ọ bụrụ na-amasị gị laptọọpụ LG, n'okpuru anyị emewo nhọrọ nke kasị mma enye taa ka i wee nweta ya na kasị mma price:
LG laptọọpụ nso
N'ime LG laptọọpụ ndị dị na ị ga-ahụ ọtụtụ ụdị na nke atọ isi ezinụlọ ma ọ bụ usoro. Ịmara ndị a na-echedo usoro isiokwu a dị mkpa iji họrọ nke kacha kwesị ekwesị:
Ọ bụ ihe dị iche iche maka ndị ọrụ dị elu na-achọ laptọọpụ ebe a na-akwụ ụgwọ nlebara anya na nkọwa ọ bụla, mana na-achụghị oke ogo / ọnụahịa dị mma.
N'ịbụ otu n'ime ndị na-emepụta ihuenyo kachasị mma, LG enyela ngwá ọrụ ya niile nwere ezigbo panels, na mkpebi dị egwu yana otu n'ime ihe oyiyi kachasị mma na ahịa.
N'ime ụdị Gram ị nwere ike ịchọta akụrụngwa maka ụlọ ọrụ na ụlọ.
Ezinụlọ ndị ọzọ nke ụdị laptop LG nwere ezigbo akụrụngwa ultralight, mana nwere nnukwu arụmọrụ. Ha na-enye nha ihuenyo dị iche iche, yana ngwaike dị oke egwu, dị ka ọgbọ ọhụrụ nke Intel CPUs na NVIDIA GeForce GTX GPUs raara onwe ya nye.
LG gram na-agbanwe agbanwe
N'ime Gram ahụ nwekwara ndị na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ 2 na 1, ya bụ, laptọọpụ na-ejikọta ụwa kacha mma na ụwa nke laptọọpụ. Ngwaahịa nke nwere arụmọrụ na nkasi obi nke keyboard na touchpad raara onwe ya nye, ebe enwere ike ịpịaji ma jiri ya dị ka mbadamba ihe nwere ihuenyo mmetụ ya.
Na mgbakwunye, dị ka ụmụnne ya ndị tọrọ ya, usoro isiokwu a gụnyekwara Windows 10 Sistemụ arụ ọrụ ụlọ, yabụ ị ga-enwe sọftụwia niile dị na PC gị yana ngwa mkpanaka agaghị ejedebe gị.
Ụfọdụ atụmatụ nke LG laptọọpụ
Laptọọpụ LG gụnyere ụfọdụ atụmatụ na-adọrọ mmasị karịsịa, na ha nwere ike inyere gị aka ịhọrọ otu n'ime otu ndị a. Njirimara ndị a bụ:
1 kg nke ibu: Grams nwere ihe dị ka 1 n'arọ, nke na-etinye ha n'ime akwụkwọ ultrabook kacha dị mfe. Modelsfọdụ ụdị nwere ike gafere ihe mgbochi ahụ site na gram ole na ole, mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile na-anọ na igwe ahụ, na-enye nnukwu ọkụ iji meziwanye ngagharị ha ruo oke.
Ruo awa 18 nke batrị: ngwaike na-arụ ọrụ nke ọma nke ọ na-agụnye, na batrị nke dị ịrịba ama dị mma na ikike, na-eme ka ngwaọrụ ndị a, n'agbanyeghị ịdị arọ na ịdị arọ ha, nwere otu n'ime nnwere onwe kachasị mma na ahịa, na-enwe ike iru 18 awa ọrụ n'ọnọdụ ụfọdụ. . Nke ahụ pụtara na ị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka ụbọchị 2 na-enweghị ịchaji.
Ngosipụta enweghị Frame- Dịka m kwuru na mbụ, LG bụ otu n'ime ndị nrụpụta ihuenyo kachasị mma, yana Samsung. N'ezie, Apple tinyere ego na ụlọ ọrụ a iji nweta panel maka kọmputa ya. Ma ọ bụ na ụlọ ọrụ a bụ otu n'ime ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ na nke nwere enyo ndị a pụrụ ịdabere na ya. N'ihi nke a, LG laptọọpụ na-onwem na kasị mma ngebichi na ahịa, na mgbakwunye na inwe ukwuu ekele nkọwa dị ka mbelata okpokolo agba na-ebuli ọrụ elu.
Ogo ihuenyo dị na laptọọpụ LG
N'ime LG Gram, Ultra ma ọ bụ laptọọpụ na-agbanwe agbanwe, ị ga-ahụ nha panel dị iche iche. Ndị a nwere ike ịbụ nke ha uru na ọghọm:
Nke kacha nta nwere akụkụ ihuenyo ndị a. Ihuenyo ndị a buru ibu karịa mbadamba nkume, na-enye nkasi obi dị ukwuu maka onye ọrụ. Agbanyeghị, obere nha ya ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ buru ibu ga-eme ka mmegharị nke akwụkwọ ndetu dịkwuo mma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, kọmpụta 13 "nwere ike ịma mma maka ndị chọrọ iburu laptọọpụ site n'otu ebe gaa n'ebe ọzọ, na-enwe obere kọmpat, ngwa ọkụ, yana nnwere onwe dị ukwuu site n'ịghara ịzụ nnukwu panel.
Ọ bụ inch buru ibu karịa nke gara aga, ya mere ọ ka na-ejigide otu uru na ọghọm ya. Naanị ihe dị iche bụ na ị ga-enwe ihuenyo dịtụ elu, mana mmegharị ahụ ga-emetụtakwa ntakịrị. N'okwu a, ha dị mma maka ndị na-achọ ihe dị n'etiti 13 na 15 ".
Ha bụ nha akwadoro maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ibu nke otu ndị a adịghị elu, na mgbakwunye na nnwere onwe na-adịkarị mma. Na ị ga-enwe nnukwu ebe ọrụ maka ntụrụndụ ma ọ bụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị ga-eji ya na-agụ, dee, ma ọ bụ na-ekiri multimedia, ọ bụ oké nhọrọ idobe anya gị na obere ihuenyo.
Maka ndị ọrụ chọrọ nha ihuenyo ka ukwuu, ma ha ga-ekiri vidiyo, ma ọ bụ maka egwuregwu vidiyo, enwere kọmputa nwere ihuenyo 17 ”. Ibu nke ndị a na akụkụ ha dị elu, na nnwere onwe ga-ebelata ntakịrị. Otú ọ dị, ị na-enweta na ebe ọrụ, nke dị ezigbo mma.
LG ọ bụ ezigbo akara laptop? Echiche m
Si buscas àgwà, imewe na elu arụmọrụYa mere, LG nwere ike ịbụ nnukwu ika, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị mma ma a bịa n'igosipụta. Na mgbakwunye, ị nwere nkwa nke nnukwu teknụzụ dị ka LG. Otu ụlọ ọrụ nke nwere akụkọ ihe mere eme dịtụ iche na ụdị laptọọpụ ya, na oge ya nke ọ na-elebara ha anya na ndị ọzọ nke ọ masịrị ilekwasị anya na ahịa ndị ọzọ na-amị mkpụrụ maka ya, dị ka telivishọn.
Ma nke a apụtaghị na e leghaara ha anya, n'ezie, mgbe LG malitere ịrụ ọrụ iji malite laptọọpụ ha jisiri ike bụrụ ndị kachasị elu n'ihe gbasara ịdịmma na arụmọrụ. Ya mere, ịzụrụ otu n'ime otu ndị a nwere ike ịbụ nkwa inweta nke ọma...
Ebe ị ga-azụta laptọọpụ LG dị ọnụ ala
Ọ bụrụ na ị kpebie ịzụta otu LG laptọọpụ na ọnụ ahịa dị mma, mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ịma ụfọdụ ebe ha na-ere ndị a ika akụrụngwa:
mediamarkt: Agbụ ụlọ ahịa teknụzụ dabere na German nwere nnukwu kọmpụta laptop aha aha, gụnyere LG. N'ebe ahụ, ị ​​​​ga-ahụ ụdị ndị a na ọnụahịa dị mma, ị ga-enwekwa ike ịzụta ma n'onwe gị na n'ịntanetị.
AmazonNnukwu akwụkwọ America na-enyekwa laptọọpụ ụdị na usoro niile. Nke a bụ ebe ọzọ kacha mma ịzụrụ laptọọpụ LG nwere oke nkwa yana yana nchekwa zuru oke. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa Prime ị nwere ike zitere gị ya n'oge ndekọ na-akwụghị ụgwọ mbupu.
Ụlọikpe Bekee: yinye Spanish nwekwara ụfọdụ ụdị ugbu a nke akara South Korea a. Ọnụ ahịa, ma na ụlọ ahịa ma na weebụ, abụghị nke kachasị asọmpi, n'agbanyeghị na ị nwere ike na-echere mgbe niile maka nkwalite ma ọ bụ mbelata ...
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ụdị » LG laptọọpụ